Ukugqoka okubomvu kuwumkhuba weqiniso, okubalulekile kungakhathaliseki ukuthi abantu abazungezile bayacabangani ngakho. Izimpawu nezindinganiso ezembathweni zombala obomvu zibala. Lo mbala wawuhlale uhlotshaniswa nomlilo, amandla, ubungqabavu nobuhle. Intombazane ekhethile ijazi elibomvu kufanele yazi ukuthi umbala obomvu nemithunzi ebomvu babhekwa njengophawu lwesifiso nentshisekelo, futhi isembatho esifanayo sizokwembulela ubulili bakho.
Khetha izingubo ezibomvu
Ukugqoka okubomvu kusihlwa kuyonikezwa umnikazi wayo ngemuva kwesivakashi nganoma yisiphi kusihlwa. Umgqoko omude "phansi" wombala obomvu uzongeza emfanekisweni wemfihlakalo nemfihlakalo, imikhono emide - ukuhlakanipha nokuvinjelwa, umthamo ojulile uyokwengeza ukubukeka nokuheha abesifazane.
Nquma ukuthi ubani ofuna ukuba kulesi sigqoko esibomvu, ngenkathi ungakhohlwa ngezesekeli ezenziwe ngesitayela. Indwangu ebomvu ebomvu iphezu kwamadolo, lezi zigqoko zivame ukubizwa ngokuthi izingubo ze-cocktail, lokhu kuyindlela yokuya kumaqembu namaqembu. Kuzokunika ukubukeka okungenangqondo nokudlala, kuzokuvumela ukuba ubonise imilenze emihle.
Uma uthenge ingubo ebomvu obomvu obusika obunzima, ungagcizelela isitayela esiyingqayizivele nesodwa. Ungakhohlwa ukugqoka ngamaphetheni okuqala. Ngokwesiko, ungahlanganisa imibala efana nomhlophe, obomvu nomnyama.
Noma yimuphi omunye umthunzi noma umbala ungakha umphumela ozoqinisa ngehlobiso elihle, isakhiwo sejometri noma iphethini lobuhlanga. Kumakhosazana amancane, izingubo ezibomvu nazo zifanelekile, futhi noma yimuphi intombazane iyojabula uma evela kuleli holide esembathweni esimangalisayo nesigqamile.
Zonke izinkathi ziyizigqoko ezibomvu ezifanele - entwasahlobo, ehlobo, zidala isithombe esingenakulibaleka futhi esicacile futhi zivuselele isimo sengqondo ngokuklama kwazo "okushisayo". Muva nje, amamodeli afanelekayo afanelekayo akakaze anike izikhundla, futhi izingubo ezibomvu nge-geometric enekhono noma ukusika okungenasisindo ziye zathandwa. Lokhu kusho ukuthi zonke izintombi, intombazane kanye nowesifazane bangakhetha ukugqoka okubomvu okungajwayelekile, kuyobe kuyimfashini futhi ikhululekile.
Yini okugqoka ingubo ebomvu?
Umbala obomvu uhlanganiswe nombala omnyama. Ibhande, isikhwama nesikhwama esimnyama - lezi zesekeli zizokufanelana kahle. Izicathulo izicathulo kuphela ngesithende noma izicathulo ezimnyama. Ukugqoka okubomvu akudingeki ukuthi kwenziwe ngokweqile ngezesekeli, sekuvele kukhanye. Ukucweba ubucwebe obufanelekayo ngegolide.
Indwangu ebomvu ihamba kahle ngezesekeli nezicathulo ezibomvu. Kodwa kufanele kube nomunye umbala obomvu. Uma unembatho obomvu obomvu, kungcono ukuwufaka ngezicathulo zethenda pink noma burgundy umbala, ibhande, isikhwama. Akudingekile ukhethe izicathulo nezesekeli nge ithoni ngengubo, akuyona imfashini.
Indwangu ebomvu igqoke ngesibindi nge-beige noma ngezesekeli zesiliva nezicathulo. Le nhlanganisela izonikeza ububele besithombe nobufazi.
Uma wakhetha ijazi elibomvu elidakayo lokuphuma ekukhanyeni, ngesigqoko esincane esingaphambi, umsila omude ngemuva, ne-corsage, izimbali ezibomvu zaziboshwe ezinwele zakho, bese ukhetha izesekeli kufanele zigcinwe ngaphezulu. Ungakwazi ukukhokhela amacici amancane kakhulu ombala omnyama noma wegolide, uma igqoke libomvu, izicathulo ziyi-burgundy noma emzimbeni, futhi zingcono kakhulu kuwo wonke amnyama, amnyama amnyama namacici amacici. Futhi akukho frills.
Izembatho ezibomvu zingasetshenziswa: njengeziphothuli, izambatho zokugqoka noma zokugqoka, ezinye izingubo zingasebenza ngezinyawo noma njengezingubo eziqinile zehhovisi. Uma izingubo zenziwe ngendwangu enhle kakhulu futhi ebiza kakhulu, awudingi ukugqoka izesekeli eziningi. Vumela ingubo ibe yinto esemqoka, kufanele ibe yinto ebuhle bayo. Kusele ukufaka iphunga lomnandi wakho oyithandayo, futhi inhlanhla izohambisana nesithombe sakho kule ngubo ebomvu.
Inhle yemvelo: iqoqo leJ J. Crew for imisebenzi yangaphandle
Indlela yokukhetha izingubo ezithakazelisayo nezindleko
Jamu kusuka ku-zucchini nge-ananas, ama-apula, i-lemon ne-orange-zokupheka ngezinyathelo ngezinyathelo
Ama-sexuality: impilo ngaphandle kocansi
Ubhontshisi kuhhavini ye-microwave
Isobho nge lentile namazambane
UNastasya Samburskaya wanikela ikhaya elisha loNyaka Omusha
Yini okufanele owesifazane oshadile
Umdlali u-Victor Kosykh
E-intanethi okokuqala kwakukhona isithombe sendodakazi kaTatyana Navka noDmitry Peskov ubuso obugcwele
Ukulimala ngesikhathi socansi